“What’s Wrong with Secretary Kim” အဖွဲ့သားတွေရဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲလေး… – Trend.com.mm
ဒီဇင်ဘာ ၂ရက်နေ့က လူငယ်ပရိသတ်တွေကြားထဲ ရေပန်းစားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ “What’s Wrong with Secretary Kim” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက အဖွဲ့သားတွေအားလုံး ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပွဲလေးကျင်းပခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
အဆိုတော်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Yewon took က သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ သူတို့အားလုံးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ “We’realittle late but it was so nice for all of us to get together like this, even our director, despite everyone being busy! ‘What’s Wrong with Secretary Kim.’ I love you” လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။အားလုံးအလုပ်ကိုယ်စီရှုပ်နေပေမဲ့အခုလိုပြန်ပြီးအတူတူဆုံရလို့ ၀မ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
Hong Ji Yoon ကလည်း ““Chansung and Kang Hong Seok werealittle late, so they’re on the table. Our ‘What’s Wrong with Secretary Kim’ team is seriously the best. I love you”ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။Chansung နဲ့ Kang Hong Seok က နောက်ကျပေမဲ့ ပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ပါအောင်ထည့်ထားပေးပါတယ်။ဘယ်လိုတောင်ချစ်ကြတဲ့အဖွဲ့သားတွေလဲ < 3
“What’s Wrong with Secretary Kim”ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ဇူလိုင်လထဲမှာပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုအများအပြားရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာမင်းသား Park Seo Joon ၊မင်းသမီး Park Min Young တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတဲ့သူတို့အဖွဲ့သားတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်ပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
A post shared by 예원 YEWON (@yeeee_kk) on Dec 1, 2018 at 8:50pm PST
ဒီဇငျဘာ ၂ရကျနကေ့ လူငယျပရိသတျတှကွေားထဲ ရပေနျးစားလူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ “What’s Wrong with Secretary Kim” ဇာတျလမျးတှဲထဲက အဖှဲ့သားတှအေားလုံး ပွနျလညျဆုံတှပှေဲ့လေးကငျြးပခဲ့ကွတယျလို့သိရပါတယျ။
အဆိုတျောမငျးသမီးဖွဈတဲ့ Yewon took က သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျအငျစတာဂရမျအကောငျ့မှာ သူတို့အားလုံးရဲ့ ဓာတျပုံလေးနဲ့ “We’realittle late but it was so nice for all of us to get together like this, even our director, despite everyone being busy! ‘What’s Wrong with Secretary Kim.’ I love you” လို့ရေးသားထားတာတှရေ့ပါတယျ။အားလုံးအလုပျကိုယျစီရှုပျနပေမေဲ့အခုလိုပွနျပွီးအတူတူဆုံရလို့ ဝမျးသာတယျဆိုတဲ့အကွောငျး
Hong Ji Yoon ကလညျး ““Chansung and Kang Hong Seok werealittle late, so they’re on the table. Our ‘What’s Wrong with Secretary Kim’ team is seriously the best. I love you”ဆိုပွီး ရေးသားထားပါတယျ။Chansung နဲ့ Kang Hong Seok က နောကျကပြမေဲ့ ပရိသတျတှမွေငျတှရေ့တဲ့အတိုငျးဓာတျပုံထဲမှာတော့ပါအောငျထညျ့ထားပေးပါတယျ။ဘယျလိုတောငျခဈြကွတဲ့အဖှဲ့သားတှလေဲ < 3
“What’s Wrong with Secretary Kim”ဇာတျလမျးတှဲဟာ ဇူလိုငျလထဲမှာပွီးဆုံးသှားတာဖွဈပွီး ပရိသတျအားပေးမှုအမြားအပွားရရှိခဲ့တဲ့ဇာတျလမျးတှဲဖွဈပါတယျ။ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာမငျးသား Park Seo Joon ၊မငျးသမီး Park Min Young တို့က အဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားတာဖွဈပါတယျ။ပွနျလညျဆုံတှကွေ့တဲ့သူတို့အဖှဲ့သားတှရေဲ့ ပုံရိပျတှကေို ပရိသတျတှအေတှကျပွနျပွီးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။